အမ​လေး​ကြောက်​စရာကြီးဗျို့ တကယ်​​ကြောက်​စရာကြီးဗျ ညနက်​​အောင်​လိုင်းသုံးရင်​. – Blue Sea
အမ​လေး​ကြောက်​စရာကြီးဗျို့ တကယ်​​ကြောက်​စရာကြီးဗျ ညနက်​​အောင်​လိုင်းသုံးရင်​.
blueseaskt | March 21, 2019 | Health | No Comments
==== ညတိုင်းညတိုင်း အိပ်​ချိန်​အတွက်​
၁၁ နာရီထက်​ ​နောက်​မကျ​စေကြနဲ့​နော်​
ညအိပ်ယာထဲ အထိ အွန်လိုင်းသုံးရင် ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာ ဖတ်​ ဖြစ်အောင် ဖတ့််သွားကြပါ
ညနက်တဲ့အထိ ဖေ့စ်ဘုတ်သုံး လျှင်​
ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဖတ်ကြည့်ပါ (တကယ်ကြောက်စရာမို့ သတိထားသင့်ပါတယ်)
ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှင်များအားလုံးနီးပါးကလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ ၁၁-၃ အတွင်း အနားမယူပဲ အလုပ်တစ်ခုခု လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းမဟုတ်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ ဆိုးဝါးလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချို သမား အနာဖြစ်လျှင်အမြန်ပျောက်ကင်းစေသော နည်းလမ်းနှစ်သွယ်
အမျိုးသမီး​တွေအတွက်​ ကင်​ဆာထိ​တောင်​ ​ပျောက်​ကင်းပြီး ဆီးချို၊ ​သွေးတိုး၊ မီးယပ်​​ရောဂါနဲ့ လေးဖက်​နာ​တွေအတွက်​ အစွမ်းထက်​ လက်ပံပွင့်
ကျန်းမာ​ရေး ဝန်​ကြီးဌာနက ထုတ်​ပြန်​လိုက်​တဲ့ သုံးစွဲရန်​မသင့်​တဲ့ တိုင်းရင်း​ဆေးများ